Accueil > Gazetin'ny nosy > Tsy ampy vola ny fanjakana: Ny vahoaka no poretiny an-kolaka
Tsy ampy vola ny fanjakana: Ny vahoaka no poretiny an-kolaka
Miezaka manentana ny olom-pirenena handray anjara amin’ny raharaham-pirenena ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina. Tsy misy maharatsy an’izany satria firenena iaraha-manana ity ka samy iantsorohan’andraikitra sy adidy hanavotra azy sy hanarina azy ary hampandroso azy sy hampiroborobo azy ny tsirairay.
Etsy ankilany koa anefa aloha dia tokony tsy hadinoina fa ny olom-pirenena Malagasy dia mahafantatra ny andraikiny sy ny adidiny amin’ny firenena saingy matoa izy tsy manana faharisihana na mandositra an’izany dia ao raha.
Mirehaka aoka izany mantsy ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina, amin’ny alalan’ny minisitra ny Fahasalamana, ny Pr Andriamanarivo Mamy Lalatiana, amin’ny fanentanana ny vahoaka handray anjara amin’ilay “fitia tsy mba hetra” (cotisation) hoenti-manana ilay “tahirim-pirenena ho firaisan-kina ara-pahasalamana” (Caisse nationale de solidarité santé).
Tsy misy maharatsy an’izany amin’izao fa izay manan-katolotra dia adidiny ny manome satria tsy hafa akory no niavian’iny natolony na homeny iny fa avy amin’ny vahoaka Malagasy ihany. Izay tsy afa-manoatra kosa, tsy tokony omen-tsiny na tsy omena ny zony amin’ny sehatra hafa sy amin’ny fotoana sasany. Ohatra amin’izany ny hoe “raha tsy mandrotsaka ny anjarany amin’io tahiry io ny olom-pirenena na ankohonana Malagasy iray dia tsy maintsy manefa ny saran’ny fitsaboana azy raha mandeha any amin’ny tobim-pitsaboana tantanin’ny fanjakana…” Na raha tsy mandoa fitia tsy mba hetra amin’io tahiry ho firaisan-kina amin’ny fahasalamana io dia tsy mahazo ny taratasy ilainy any amin’ny fokontany na any amin’ny kaomina.
Etsy ankilany, marina fa io Tahirim-pirenena ho firaisan-kina amin’ny fahasalamana io dia hitsinjovana an’ireo Malagasy sahirana, ka raha tratry ny aretina na tsy fahasalamana iny dia mba maimaim-poana ny fizaham-pahasalamana atao aminy ary tsy ampandoavina vola izy amin’ny saram-pitsaboana azy rehefa manatona tobim-pitsaboana ara-panjakana.
Ny tsy azo hadinoina koa anefa dia saika fadiranovana tsy afaka miatrika ny fitsaboana azy ange ny 80%-n’ny Malagasy e! Tokony maimaim-poana avokoa izany ny fitsaboan’izy ireo tena. Sa avela hiandry ny sitrapon’Andriamanitra any an-tokantranony any fotsiny izy ireny?
Lasa ihany koa anefa ny saina hoe “moa tsy vola notangosana tamin’ny vahoaka madinika ihany tamin’ny alalan’ny saram-pifandraisan-davitra (Telma, Airtel…) io hanajan-dry zareo antsika Malagasy io”? Jereo ange fa hahenan-dreo indray ny faharetan’ny antso amin’ireny fifandraisan-davitra sahanin-dreo ireny io e! Mody tsy ahetsiny ny sarany e! Midika ho fampiakarana ny saran’ny fifandraisana ihany aloha izany e! Dia ny madinika mba voavonjin’ireny fifandraisan-davitra ireny ihany no ivesaran’ny fisondrotana.
Eo no ampahatsiahivanay sy anindrianay hatrany fa ny harem-pirenentsika re, ry Malagasy havana, raha tsara tantana sy ampanjakana ny fahamarinana ny momba azy, dia tsy ho lanintsika hikarakarana ny vahoaka, hananganana fotodrafitrasa, hampandrosoana ny firenena e! Singa iray ao anatin’izany ny fitsaboana maimaim-poana ny Malagasy rehetra, na manana na sahirana, tsy ilàna fitia tsy mba hetra hifamolosan’ny samy Malagasy eto izany na fanentanana ny Malagasy.